Bogga ugu weyn 10 -ka Ciyaaryahan Fiidiyowga Ugu Fiican Sanadka 2022
Sawir laga soo qaaday Pexels
Fiidiyowgu wuxuu ku dhex milmay dhinac kasta oo nolosheena ah - waa qaabka koowaad ee muujinta, isgaarsiinta, iyo isku xirnaanta. Waxaan kula kulannaa baabuurtayada, guryaheena, iyo aaladaha mobilada. Iyada oo ay jiraan dad badan oo sameeya fiidiyowyo sidii hore ka badan, tusahan wuxuu ku siin doonaa liiska 10 -ka ugu sarreeya ee fiidiyaha fiidiyaha ee bixiya waayo -aragnimo fiidiyow oo buuxa.
Iyada oo leh fiidiyaha fiidiyaha ee ugu fiican, maahan inaad ka welwesho soo dejinta koodhyo dheeri ah ama plugins si aad u ciyaarto filimadaada iyo bandhigyadaada. Si ka duwan softiweerka qalabka fiidiyaha ee kombuyuutarkaaga horay loogu sii rakibay, ciyaaryahanka fiidiyaha ee bilaashka ah ayaa ka boodaya dhammaan iskahorimaadyada soo dejinta codecs iyo plugins wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad isla markiiba daawato.
10 -ka Ciyaaryahan Fiidiyow ee Ugu Fiican
Halkaan waxaa ah liiska cayaartoyda fiidiyaha ee ugu fiican.
VLC waa cayaaryahan warbaahin multimedia ah oo lacag la’aan ah oo il-furan oo isku-dhafan oo ka ciyaara inta badan faylasha war-baahinta iyo sidoo kale DVD-yada, CD-yada maqalka, VCD-yada, iyo hab-raaca kala duwan ee qulqulka.
Waa ciyaar-fiidiyaha fiidiyaha bilaashka ah haddii aad raadinayso softiweer wax ka qaban kara nooc kasta oo fiidiyow ah. Software-kan aadka u badan wuxuu ciyaari karaa fiidiyowyo 360-digrii ah, filimo, iyo clips ilaa 8K qaraar ah, iyo fiidiyowyo qaabab faylka la cadaadiyey ah.
Ciyaaryahankan fiidiyaha ah ee bilaashka ah wuxuu kaloo bixiyaa qalab iyo kontaroolo aad u fiican. Waad beddeli kartaa dejimaha fiidiyahaaga si aad u hagaajiso dib -u -ciyaaridda ama tayada maqalka oo aad ku darto shaandhayn si aad u beddesho muuqaalka goosgoosyada shaqsiyeed. VLC Media Player wuxuu kaloo la shaqeeyaa cinwaanno hoosaadyo isku mid ah, kuwaas oo gacan ka geysanaya daawashada filimada leh codka la damiyo.
Ciyaaryahankan fiidiyaha ee bilaashka ah waa mid fudud, dhakhso badan, awoodna leh. Waxay ka socotaa dhammaan aaladaha: Windows, Linux, MAC OS X, Unix, iOS, iyo Android. Ciyaaryahanku wuxuu kaloo ka madax bannaan yahay spyware, xayeysiisyada, iyo nidaamka raadraaca isticmaalaha.
Dejinta qalabka degdegga ah
U ciyaaraa qaabka oo dhan
GOOBTA SOO SAARKA
ARAG SIDOO KALE: 15 Software -ka Wada -sheekaysiga Fiidiyowga Bilaashka ah ee Goob -hawleedka 2022
2. Ciyaaryahan GOM
GOM waa cayaaryahan fiidyow oo lacag la’aan ah oo siiya adeegsadayaasha waxqabad sare iyo qanacsanaan. Waxay taageertaa qaabab faylal kala duwan oo ay ka mid yihiin AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV, iwm Windows gudaheeda, Waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad hesho koodhyo, ciyaaro faylal dhaawacan, ama fayl la soo dejinayo. GOM Player wuxuu bixiyaa shaqooyin badan oo horumarsan si loogu ciyaaro fiidiyowyada gadaal.
Ka sokow ku ciyaarista fiidiyowyo 360-digrii ah oo aad haysato, waxaad ku raaxeysan kartaa heer sare oo bakhtiinta ah qaabka 360-degree. GOM waxay bixisaa interface wanaagsan oo aan soo bandhigin xayeysiisyada. Kaliya waxay soo bandhigaysaa 4K filimada UHD iyada oo aan la daboolin.
Ciyaaryahanka GOM wuxuu kaloo taageeraa baahinta shaashadda, si aad kombiyuutarkaaga ugu xirto telefishankaaga ama masaajidka oo aad ugu ciyaarto shaashad weyn.
Wuxuu ciyaaraa faylal jabay
Taageero file warbaahinta badan
ARAG SIDOO KALE: 2022 Barnaamijyada Samsung Smart TV ee Hack Adigu Ma Tijaabin
5KPlayer waa mid ka mid ah xulashooyinka bilaashka ah ee dhammaystiran ee ma aha oo kaliya daawashada fiidiyowyada, laakiin maareynta aruurinta fiidiyahaaga oo dhan. Softiweerku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku darto maktabadda fiidiyowga kombiyuutarka oo dhan, sidaa darteed waxaad ka dooran kartaa fiidiyowyo gudaha 5KPlayer halkii aad ka baari lahayd darawalkaaga adag.
Ciyaaryahanku wuxuu taageeraa kaliya nooc kasta oo ah qaab fiidiyow ah oo ay u badan tahay inaad la kulanto, oo ay ku jiraan 360-digrii iyo fiidiyowyo 8K ah. 5KPlayer waa isku -darka wanaagsan ee xakamaynta DLNA, soo -saare DLNA, iyo server -ka DLNA ka sokow.
5KPlayer, isku -darka fiidiyowga UHD ee bilaashka ah (MKV), muusig muusig, AirPlay & DLNA karti -siiyaha warbaahinta, iyo soo -dejiyaha internetka. Ciyaaryahankan warbaahinta xorta ah wuxuu:
Play 4K/1080p/360 ° video, DVD, iyo IPTV oo leh naqshad kacaan.
Si fiican u ciyaar muusikada MP3 AAC APE FLAC si aad u kiciso dareenkaaga.
Fiidiyow-maqal-la'aan si toos ah uga sii daaya AirPlay & DLNA, luminta tayada eber.
Soo dejiso fiidiyowyo/muusig ka yimid YouTube, Dailymotion, Vimeo, iwm.
5KPlayer wuxuu taageeraa noocyo badan oo cinwaan hoosaadyo ah. Waxaa si fiican loogu diyaariyey *.srt, *.ssa, *.ass, *.json, *.aqt, *.sub, iwm oo wax badan kaa badbaadin kara dhibka ah beddelidda qaab hoosaadyo.
Akhri ALSO: 5 Siyaabood Oo Lacag Loogu Sameeyo Daawashada Netflix sanadka 2022
Ciyaaryahanka fiidiyaha bilaashka ah ee ugu wanaagsan halkaas, Pot Player waa cayaaryahan fiidiyoow oo aad u awood badan. Waxay leedahay tiro aad u tiro badan oo koodhyo ah oo lagu dhex dhisay waxayna bixisaa taageero ma aha oo kaliya 360-degree iyo 8K fiidiyow, laakiin sidoo kale fiidiyowyo 3D ah. Haddii aad ku tuurto qaab fayl ah softiweerkan oo uusan horay u taageerin, Pot Player ayaa si otomaatig ah kuugu soo dejisan doona koodhkii loo baahnaa.
Ikhtiyaarada habaynta dib-u-ciyaarista fiidiyaha ayaa aad u cajaa'ib leh, halka kuleylka kulul ay kuu oggolaanayaan inaad gasho goobahaaga inta badan la isticmaalo iyada oo aan cillad lahayn.
Intaa waxaa dheer, PotPlayer wuxuu siiyaa waxqabadka ugu sarreeya ilaha ugu yar isagoo adeegsanaya DXVA, CUDA, QuickSync. Waxa kale oo ay taageertaa qaabab Cinwaan kala duwan. Cinwaan hoosaadyo qoraal ah (SMI & SRT), DVD (Vobsub) iyo subtitles Blu-ray, animation ASS/SSA iyo SMI Ruby tags, iwm
Ciyaar fiidyow siman oo aan xuduud lahayn.
Xulo midka marka aad haysato 2 kaar oo cod ah.
Ku -fiirso muuqaalka sawir -qaadid.
Waxaad calaamadeyn kartaa goobta aad jeceshahay ama cutubka.
Direct3D9 Ex Flip Mode iyo overlay.
Waxay taageertaa aalado kala duwan sida DVD, TV, HDTV.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad aragto: 25 Hiwaayad suuq geyn ah oo Lacag ka Helaya Guriga | Si Dhaqso Ah U Qaado Kaash
Kodi waa cayaaryahan warbaahin oo lacag la’aan ah oo siiya dareen wanaagsan muusiggaaga, filimadaada, bandhigyada TV -ga, iyo sawirradaada. Waa barnaamij madadaalo ah oo isu keena dhammaan warbaahintaada dhijitaalka ah si loo abuuro qurux la yaab leh. Waa il furan, la habeyn karo, waxaana lagu rakibi karaa Linux, OSX, Windows, iOS, iyo Android, oo leh muuqaal 10-cagood oo adeegsade ah si loogu isticmaalo telefishannada iyo kontaroolada fog.
Markaad daawato fiidiyowyada ku jira ciyaartoygan shaashad buuxda oo is-dhexgal TV-ga 10-cagood ah, waxaad ka eegi kartaa sawirrada oo aad dhegeysan kartaa muusikada inta aad daawaneyso filim.
Kodi waxaa loo heli karaa nidaamyo badan oo hawlgal ah iyo aaladaha qalabka, oo ay kujiraan istcimaalo isticmaale 10-foot ah si loogu isticmaalo telefishannada iyo kontaroolada fog. Waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay ciyaaraan oo arkaan fiidiyowyada badankood, muusikada, fiidiyaha, iyo faylasha kale ee warbaahinta dhijitaalka ah ee warbaahinta kaydinta maxalliga iyo shabakadda iyo internetka.
Kodi wuxuu ciyaari karaa dhammaan muusikadaada oo ay ku jiraan mp3, flac, wav, iyo qaababka wma
Waxay taageertaa dhammaan qaababka fiidiyaha waxayna sidoo kale awood u siisaa adeegsadaha inuu soo dejiyo, daalaco oo ku ciyaaro filim si fudud
Kodi wuxuu kuu oggolaanayaa inaad daawato oo aad duubto TV -ga tooska ah oo dhan laga bilaabo fududahay in la isticmaalo.
Isticmaalayaashu waxay la macaamili karaan Kodi iyaga oo adeegsanaya JSON-RPC ku saleysan interface fog
Kodi wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si buuxda u beddesho muuqaalka muuqaalka oo dhan oo leh maqaar.
ARAG SIDOO KALE: 13 VPN ee ugu Fiican Isticmaalayaasha Android iyo iPhone sanadka 2022
DivX waa cayaaryahan fiidyow oo lacag la’aan ah oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay ku ciyaaraan DivX, AVI, MKV, iyo HEVC faylal ilaa tayo 4K ah. Waxay u shaqeysaa sidii cayaaryahan kumbuyuutar oo kumbuyuutarro badan leh oo leh server warbaahineed oo ku dhex jira oo kuu oggolaanaya inaad ku wareejiso muusigga qulqulka, fiidiyowyada, iyo sawirrada aalad kasta oo DLNA ku habboon.
Maktabaddeeda warbaahineed ee caqliga badan waxay u oggolaanaysaa dadka isticmaala inay abaabulaan liisaska ciyaarta oo ay daawadaan waxyaabaha warbaahinta maxalliga ah. Ciyaaryahankan fiidiyaha ah wuxuu leeyahay astaamo horumarsan sida Trick Play, kaas oo fududeynaya inaad ku dhex socoto qaybaha aad jeceshahay.
Taageero maqal oo badan ayaa awood u siineysa in la kala beddelo heesaha maqalka ee kala duwan, iyada oo la adeegsanayo resumeyga, waxaad aadi kartaa meesha aad joojisay.
DivX waxay leedahay astaamaha shahaadadeena ugu weyn:
DivX HEVC Ultra - Ciyaar dhammaan astaamaha fiidiyowga DivX oo ay ku jiraan faylasha 4K HEVC. Ku raaxayso MKV, AVI, DIVX faylal, iyo in ka badan, oo lagu daray astaamo dib -u -ciyaar oo horumarsan.
DivX Plus HD - Ciyaar faylasha MKV HD HD, iyo sidoo kale AVI, faylasha DIVX, iyo inbadan, oo lagu daray ku raaxeysiga astaamaha dib -u -ciyaarida horumarsan.
DivX HD - Ciyaar fiidiyowga 720p ama 1080p HD, AVI, faylasha DIVX, iyo in ka badan, oo lagu daray ku raaxayso astaamaha dib -u -ciyaarida horumarsan.
Tiyaatarka Guriga DivX - Ciyaar faylasha qeexitaanka caadiga ah (AVI, DIVX, iyo in ka badan) oo lagu daray ku raaxeysiga astaamaha dib -u -ciyaarida horumarsan.
7. Ciyaaryahanka ACG
Kani waa cayaaryahan warbaahineed oo lacag la'aan ah oo si gaar ah loogu talagalay Windows 10. AGG waa cayaaryahan miisaankiisu yar yahay oo aan lahayn codec-ku-kordhin oo ciyaara qaabab fiidyow caadi ah. Waxa ay taageertaa loo maqli karo ka qalab dibadda iyo cajalladaha.
ACG waxay leedahay is -dhexgal cad iyo xakamaynta taabashada iyadoo la kaashanayo kiniinnada taabashada. Fiidiyowga fiidiyaha ayaa u oggolaanaya adeegsadaha inuu u habeeyo cinwaan -hoosaadyo iyo dhaqdhaqaaqyo: saamaynta maqalka iyo fiidiyaha, muuqaal muusig, iyo qoraal hoosaadyo loogu talagalay xarfaha farshaxanka. Waxaa jira hawlo lagu hagaajinayo naqshadda, sida beddelidda hargaha iyo badhamada guddiyada iyo xakamaynta xawaaraha xoqidda.
Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay badhamno guddi loo habeeyay iyo harga kala duwan. Sida inta badan ciyaartoyda warbaahinta, adeegsaduhu wuxuu xakameyn karaa xulashooyinka aasaasiga ah sida mugga, dheelitirka, iyo cabbirka shaashadda. Waxaa loo naqshadeeyay iyadoo la adeegsanayo koodhka ilaha C ++ iyo tan waxay u egtahay inay si fiican ula shaqeyso nidaamyo heer sare ah (sida Windows 10). Saamaynta farshaxanka iyo keydinta shaashadda ayaa sidoo kale ku jira xidhmadan.
Akhri ALSO: 21 Barnaamijyada Fiidiyowga ugu Fiican ee Dadka Waaweyn iyo Carruurta 2022 -ka
8. Ciyaaryahanka Video -ga Cisdem
Cisdem waa cajalad fiidiyow oo bilaash ah oo loogu talagalay MAC oo u saamaxaysa dadka isticmaala inay ku ciyaaraan fiidiyowyo 4K/5K/1080p HD ah. Taasi waa in la yiraahdo, farsamooyinka Cisdem waxaa lagu dhisay khibrado fiidyow oo tayo sare leh. Waxa kale oo aad si otomaatig ah u rari kartaa faylasha cinwaan hoosaad adigoon marin habka gacanta ee iswaafajinta kahor soo dejinta. Iyada oo la adeegsanayo Cisdem, looma baahnaan doono koodhyo dheeraad ah, plugins.
Ciyaaryahankan fiidiyaha ah ee MAC gabi ahaanba waa ka madax bannaan yahay spyware, xayeysiisyada, iyo raadraaca adeegsadaha.
Cayaaraha fiidiyaha wuxuu u rogi karaa feylasha farriimaha badan qaabab kala duwan oo loogu talagalay aalad kasta, sida iPhone, iPad, taleefannada Android, iwm, sidoo kale wuxuu bixiyaa shaqooyin kala -goyn iyo sawir -qaadis.
Haddii aad raadinayso aalad ku -habboon oo ku habboon oo leh is -dhexgal fudud oo is -dhexgal leh oo ku siin kara waayo -aragnimo daawasho HD oo wanaagsan, markaa kani waa kan ugu wanaagsan ee fiidiyaha fiidiyaha ee aaladda Apple.
Cayaaraha fiidiyaha Universal
Ciyaar fiidiyowyo 5K ah
U beddelo Fiidyowyada Portable -ka
MPV waa ciyaartoy warbaahineed oo lacag la'aan ah Windows 10, kaas oo sidoo kale u dhaca inuu noqdo il furan, tartame is-dhaafsi u leh VLC.
Waxay taageertaa noocyo badan oo ah qaabab faylal warbaahineed, cod -maqal iyo fiidyowyo, iyo noocyo Cinwaan. MPV waxay leedahay OpenGL, Vulkan, iyo D3D11 wax soo saarka fiidiyaha ku saleysan oo awood u leh astaamo badan sida cabirka fiidiyaha, maareynta midabka, waqtiga jiritaanka, isdhaafsiga, HDR, iyo inbadan.
Ikhtiyaarada CLI ee la fududeeyay
Soosaarka fiidiyaha oo tayo sare leh
Dejinta fiidiyowga GPU
10. Ciyaaryahan KM
Ciyaaryahanka KM waa cayaaryahan warbaahin badan ku hadla oo taageero u leh qaabab badan, 3D iyo fiidiyaha 4K. Waxay leedahay koodhadh horay loo rakibay, laakiin waad ku dari kartaa kuwa dhinac saddexaad ah. Waxay la timaadaa saamayn badan oo maqal/muuqaal ah: barbaraha, muujinta fiidiyaha, iyo dardargelinta qalabka.
Iyada oo la adeegsanayo KM Player, waxaad ku calaamadeyn kartaa jajabyada fiidiyowga kuwa ugu cadcad, ku celi iyaga, dib ugu wareeji furayaasha isku -xirka fog, iyo xitaa toos u tafatir cinwaannada KM Player Pro. Is -dhexgalku waa mid fudud oo si sahlan loo habeyn karo, wuxuu u muuqdaa mid siman, wuxuuna shaqeeyaa iyada oo aan shil iyo qaboojin.
KMPlayer waxaa lagu heli karaa 36 luqadood. Soo -saareyaasha ayaa dhowaan sii daayay KMPlayer oo loogu talagalay noocyada beta ee Android iyo macruufka.
Waxay ciyaari kartaa dhammaan fiidiyowyo tayo sare leh oo ay ku jiraan 4K, 8K, UHD, 60FPS
Taageero qaabab faylal warbaahineed oo kala duwan (AVI, MPEG, TS, MKV, MP4, WEBM, MOV, 3GP, 3G2, FLV, OGM, RM, WMV, MP3, iwm.)
Waxaa lagu qalabeeyay Video Renderer oo tayo sare leh
Soo dejinta fiidiyowyada sida YouTube, Instagram, Motion Daily
Iyada oo leh fiidiyaha fiidiyaha ee ugu fiican, maahan inaad ka walwasho inaad u baahan tahay inaad soo dejiso koodhyo dheeri ah ama dhejisyo si aad ugu ciyaarto filimadaada iyo bandhigyadaada. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa soo degso barnaamijka oo bilow.
techradar.com - Ciyaartoyda fiidiyaha ee ugu fiican 2022: fiirso fiidiyow qaab kasta
fixthephoto.com - 11 Ciyaartoy Fiidiyow oo Fiican Sanadkii 2022
21 Barnaamijyada Fiidiyowga ugu Fiican ee Dadka Waaweyn iyo Carruurta 2022 -ka
21 Filimadood oo Kirismas ah oo Bilaash ah Youtube -ka Sanadka 2022 | Dhererka buuxa
Shabakadaha Wax -soo -saarka 25 ee ugu sarreeya & Ku kaydi Online 2022
Sidee & Meesha Lagu Iibiyo Diiwaanka Vinyl 2021 | Tusaha Khubarada
Haddii aad wali ku haysato qaar ka mid ah rikoodhadii disco-ga ee laalaabkaaga oo aad la yaabban tahay sida loo iibiyo...
8 Siyaabood Oo Cusub Oo Loogu Xorriyo Qaacidada Ilmaha 2022 | Tilmaan fudud
Haddii aad rabto in aad dhoola cadeyn caafimaad qabta u mariso wejiga hooyada uurka leh, sii iyada oo bilaash ah...
Sida Loo Helo Sicir -dhimista Ardayga ee Samsung 2021
Maqaalkani wuxuu ku tusayaa sida ugu wanaagsan ee lagu heli karo sicir -dhimista ardayga Samsung. Samsung Group waa mid ka mid ah…
In kasta oo xaqiiqda ah in Paris ay tahay magaalada moodada adduunka, xiritaankii saddexaad ee 'Covid-19' ayaa mar kale keenaya…